Juventus vs Bologna & Guud ahaan kulamada maanta iyo caawa laga ciyaari doonto horyaalka Serie A – Gool FM
(Turin) 24 Jan 2021. Kulammo ka tirsan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ugu madax fiiqan kulanka kooxda Juventus ay soo dhoweynayso Bologna.
Kaddib markii ay ku guuleysteen koobkoodii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan Arbacadii, Kooxda Juventus ayaa sugi doonta booqashada kooxda hoose ee Bologna, si ay u dardar geliso difaacashadooda horyaalka Scudetto.
Waxa ay koobka Supercoppa Italiana ka qaadeen Napoli, Naadiga Juve ayaaa haatan fadhisa kaalinta lixaad ee kala sarreynta horyaalka Serie A, waxaana ay indhaha ku hayaan inay ka soo kabsadaan guuldarradii ugu dambeysay horyaalka ee ka soo gaartay Inter Milan.
Xaqiiqooyinka Juventus vs Bologna:-
>- Juventus ayaa guuleystay sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday kooxda Bologna tartammada oo dhan.
>- Kooxda Juventus ayaan la garaacin 36 ka mid ah 38-deedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay kulammada horyaalka Serie A.
>- Juventus ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeed ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Bologna tartammada oo dhan.
>- Kooxda Bologna ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaartay 12 ka mid ah 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda (Away).
Haddaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono horyaalka Serie A:-
02:30 Duhurnimo Juventus vs Bologna
05:00 Galabnimo Genoa vs Cagliari
05:00 Galabnimo Hellas Verona vs SSC Napoli
08:00 Habeennimo Lazio vs Sassuolo
10:45 Habeennimo Parma Calcio 1913 vs Sampdoria